I-Blazer noma i-American? - Umehluko nendlela yokugqoka ingubo ngayinye | Amadoda anesitayela
U-Alicia tomero | 11/06/2022 11:55 | Ukunakekelwa komuntu siqu, imfashini, Amathrendi
Njengoba yena i-blazer, i-blazer njengejazi, ziyafana incazelo efanayo, kodwa empeleni ngamunye unomqondo othile. Amagama anikezwe ngamunye anenhloso yawo, njengoba kuwo wonke umlando nangenxa yokuziphendukela kwemvelo, umklamo onegama lawo udaliwe.
Ingabe kufanele ukhethe phakathi kwe-blazer noma ibhantshi? Uyini umehluko phakathi kwakho kokubili? Ukwenza umbono ngenhla singathola imininingwane emincane esingayibona namuhla ezitolo ezingenakubalwa. Umehluko uphakathi kwesimanje kanye nokujwayelekile, naphakathi nenhle futhi ehlelekile.
Siyalazi igama elithi ibhantshi njengegama elijwayelekile ukuchaza i-blazer noma ibhantshi. Umsuka wayo ubhalwe kabusha kusuka ku-a Traditional England Tailoring, lapho kamuva yathunyelwa eMelika futhi igama elithi Americana lanamathiselwa kuyo.
Kumele kuqashelwe ukuthi ibhantshi yigama elinikezwe la magama amabili. Namuhla kunjengoba sikwazi, kodwa owazalelwa eNgilandi lapho kamuva yathunyelwa khona umklamo wakhe e-america. Lapho yaqala ukwenziwa njengengubo eyingqayizivele nesemthethweni nalapho kwaklonyeliswa khona igama elithi Americana. Kumele kuqashelwe ukuthi imiklamo ethile yejacket idalwe engxenyeni eyodwa.
1 I-Blazer noma i-American?
ngokuhlukile Kuzoncika kumuntu kanye nesikhathi. lapho izosetshenziswa khona. Njengoba sesibonisile, i-blazer inhle kakhulu, kodwa inalokho kuthinta kwezemidlalo. Ijazi lihle kakhulu futhi lizoncika kumcimbi noma umzuzu lapho izokwethulwa khona.
I-Blazer nejacket Lezi yimiqondo emibili ekhona iminyaka, nakuba besilokhu sigqoka ibhantshi noma i-blazer. Imininingwane kanye nokuhluka kungatholakala ezesekeli zayo kanye nokusikwa kwendwangu futhi sikucacisa ngezansi.
Ijakhethi iyingubo ehlelekile kakhulu. Yazalelwa eNgilandi ekupheleni kwekhulu le-XNUMX futhi yadalwa ngokusika imisila yamajazi ama-frock. Ngale ndlela kwakhiwa ibhantshi kulula kakhulu ukuthwala, ukusebenza okwengeziwe futhi ngaphandle kokulahlekelwa ubuhle.
Ngekhulu le-XNUMX yadalwa ibhantshi elenziwe ngokwengeziwe ngegama elithi "ijakhethi yesudi" futhi sibonga u-Beau Brummell wezicukuthwane (iphunga le-Brummell liphethe umfanekiso wakhe ophrintiwe) imfashini yakhe iyakhula njengoba eba ibhentshimakhi yemfashini ngaleso sikhathi.
izifiki english futhi yenza kwaziwe lesi sitayela sejazi. Benza izinguquko ezithile, bashiye izinkinobho ezimbili kuphela kwezintathu futhi ukuvula okukodwa enakho kushintshwa izimbobo ezimbili ezisebenzayo ohlangothini ngalunye lwengubo.
ESpain Le modeli yejacket iyafika Ikhulu le-XIX futhi isivele ibhapathiziwe njengejazi laseMelika, uma kubhekwa umsuka walo. Isitayela sayo esisemthethweni siyagqama, nge ipulakhethi yezinkinobho ezimbili ezimnyama namaphakethe ama-flap. Le jacket yaseMelika iklanyelwe ukufanisa ibhulukwe futhi ngaleyo ndlela yenza ngokusemthethweni isudi.
Yingubo efanelekile yomcimbi okhethekile nosemthethweni, njengomqhudelwano noma umgubho. Lolu hlobo lwengubo lufanelekile ukugqoka ngenkinobho yokuqala eboshwe. Nakuba siyifake njengesambatho esisemthethweni sokuphelezela amabhulukwe nokuthi aya kufanelana, singayisebenzisa futhi ngabanye futhi kancane ngokungakahleleki, siyihlanganise namabhulukwe aseShayina noma i-jeans.
Uye umsuka wayo kusukela ebuthweni lasolwandle kusuka kule datha singayihlukanisa ngokuthi iyinto edlalwa kakhulu. Ibuye inhle, kodwa ngokuthinta okuvamile. Ekuqaleni kwayo yayihlukaniswa ngokuthwala izinkinobho zensimbi namaphakethe okuchibiyela. Abanye babo babephethe uhlobo oluthile lwezimpawu ephaketheni lesifuba futhi bewuphawu lwezingubo ezizogqokwa emiqhudelwaneni yekhilikithi e-England.
INdlovukazi yaseNgilandi yaseNgilandi ngekhulu le-XNUMX yayifuna ukwenza ibhantshi, esekelwe eMelika, lapho yakhiwe ngezindwangu ezingazweli kakhulu, enamaphakethe afanayo okusika kanye nama-patch. Ngalesi sitayela singabona ukuthi kudlalwa kakhulu futhi kukhululekile.
Ngawo-20, ama-blazers aba yimfashini, lapho kwagqama ukuhlanganisa kwakhe namabhulukwe amhlophe. Namuhla singawahlanganisa nanoma yiliphi ibhulukwe, ngokuvamile isitayela esincane, kunoma yimuphi umbala ngisho ne-jeans. Ingakwazi dala ukubukeka okungajwayelekile.
Ukuze kuxoxwe ngala mabhantshi amabili, izici eziningana kufanele zikhonjiswe. Ziyimininingwane elula kakhulu lapho umMelika usemthethweni kakhulu, ngeplakhethi yenkinobho emnyama namaphakethe ama-flap. Ngokuvamile ihambisana nebhulukwe. Noma kunjalo, i-blazer ijwayelekile kakhulu, ngendwangu ukumelana kakhulu futhi enamaphakethe ama-patch. Baphelele ukugqoka ngendlela engakahleleki futhi baphelele nge jeans.
Ungasifunda kwethi "imibono yokugqoka izinhlobo ezi-3 ze-blazer" futhi ku "indlela yokwenza isithombe esihle ngama-blazers akudala".
Indlela ephelele ye-athikili: Amadoda aSitayela » Ukunakekelwa komuntu siqu » I-Blazer noma i-American?